Myanmar Up To Date News.....by Shwe Than Lwin Media Co.Ltd
နက္ခတ်သိပ္ပံ အကြံပြုလမ်းညွှန် - February 9, 2015
မင်္ဂလာရှိသော နေ့ရက်ပါခင်ဗျာ - Sky Net Up to Date Website ကို ဖတ်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူ၊ ညီအကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း တို့ဖြင့် ပြည့်စုံပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းမေတ္တာပိ်ု့သအပ်ပါတယ် . . .
မိဿ- လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ထိုးနှက်ချက်များ ရင်ဆိုင် တွေ့ကြုံ ဖြေရှင်းရချိန် ဖြစ်သည်။ ပြိဿ- မောင်နှမသားချင်း အရေးကိစ္စများအတွက် အတိုက်အခံ ပဋိပက္ခ တွေ့ကြုံမည်။ မေထုန်-	ကံကောင်းမှု အခွင့်အရေးများ ရုတ်တရက် ပေါ်ထွက်လာမည့် အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်။ ကရကဋ်- ခရီးဝေးများ သွားလာရပြီး ကံကောင်းသော အခွင့်အရေးများ ရရှိချိန် ဖြစ်သည်။ သိဟ်- စိတ်ပင်ပန်းမှုများကြောင့် ကျန်းမာရေးအညံ့ တွေ့ကြုံမည်။ ကန်- အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ငွေကုန်ကျမှု များပြားတတ်သော ကာလ ဖြစ်သည်။ တူ- လုပ်ငန်းတွင် ရုတ်တရက် အပြောင်းအလဲများ တွေ့ကြုံလာတတ်သည်။ ဗြိစ္ဆာ- ကျန်းမာရေးအညံ့နှင့် မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ တွေ့ကြုံရတတ်သည်။ ဓနု- ငွေကြေးကံ ကောင်းမွန်ပြီး ထီ ကံစမ်းပေးသင့်ချိန် ဖြစ်သည်။ မကာရ- ရွှေရောင် တိုးတက် အောင်မြင်မှုများ ဖန်တီး ပုံဖော်ခွင့် ရရှိချိန် ဖြစ်သည်။ ကုမ်- အတိုက်အခံကြားမှ အောင်မြင်မှုများ သိမ်းပိုက် ရယူနိုင်မည်။ မိန်- အခက်အခဲများကြား ရည်မှန်းချက်များ လမ်းပျောက်ဆုံးချိန် ဖြစ်သည်။ ကံကောင်းဂဏန်း	- ၃၊ ၅၊ ၉။
ငွေကြေးကံ ကောင်းမွန်ပြီး အောင်မြင်မှုများ ဖန်တီး ရယူနိုင်မည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များ တည့်မတ် မှန်ကန်ပြီး စိတ်ကူးများ ပြည့်ဝ အောင်မြင်ချိန် ဖြစ်သည်။
လူမှုရေးပိုင်း ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းမှုများ တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ရတတ်သည်။
ကံကောင်းသော အခွင့်အရေးများ တည်ဆောက် ဖန်တီး ရယူနိုင်ချိန် ဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းတွင် ကြိုးစားသလောက် အရာထင်မည်။
ဆုံးဖြတ်ချက်များ မှားယွင်းပြီး မိမိကံ အညံ့ရှိသော အချိန်ကာလ ဖြစ်သည်။
မိသားစု၌ အိမ်ခြံမြေယာဉ်များ အကျိုးရှိ ကံကောင်းမည်။
ထင်ရှား ကျော်ကြား စန်းထ အောင်မြင်မည့် ရွှေရောင်နေ့ရက် ဖြစ်သည်။
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန် ပန်းရောင်၊ အစိမ်းနု၊ ဆင်စွယ်။
တနင်္လာနေ့သားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန် ဆင်စွယ်၊ အ၀ါ၊ ပန်းရောင်။
အင်္ဂါနေ့သားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန်	 အစိမ်းနု၊ ပန်းရောင်၊ အ၀ါ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့သားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန် ပန်းရောင်၊ အစိမ်းနု၊ ဆင်စွယ်။
ကြာသာပတေးနေ့သားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန် အ၀ါ၊ အနက်၊ မီးခိုး။
သောကြာသားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန် အ၀ါ၊ အနီ၊ ပန်းရောင်။
စနေနေ့သားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန်	 ခရမ်း၊ အ၀ါ၊ အစိမ်းနု။
ရာဟုနေ့သားသမီးများ ၀တ်ဆင်ရန် အစိမ်းနု၊ အ၀ါ၊ ပန်းရောင်။
နက္ခတ်သိပံ္ပ ရင်သွေးငယ် ကံကြမ္မာနှင့် အမည်ပေး လမ်းညွှန်အကြံပြုချက်
အကောင်းဆုံး - နေ့လည်၁၂နာရီ ၄၀မိနစ်မှ နေ့လည်၁နာရီ၁၀မိနစ်အတွင်း ၂၀၁၅ဇူလိုင်မှ(၂)နှစ်အတွင်း၊၂၀၂၀ဒီဇင်ဘာမှ(၃)နှစ်အတွင်း
အမည်ပေးရန် - ၆ + ၃	၇ + ၆	၂ + ၃	၁ + ၂ ၁ + ၃	၄ + ၃	၈ + ၃
ယခုဆိုရင်တော့ February 9, 2015 ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဂြိုလ်၊ နက္ခတ်ဖြစ်စဉ်တွေကို ရှောင်ရန်၊ ဆောင်ရန်တွေကို တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘပြည်သူ၊ မောင်နှမသားချင်းများအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ကြံစည်ရည်ရွယ်သမျှ အလုံးစုံပြည့်ဝအောင်မြင်ပြီး ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ SkyNet Up to Date Website က ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ် . . .
နောက်ရက်တွေမှာလည်း ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေအတွက် နက္ခတ်သိပ္ပံမှ လမ်းညွှန်အကြံပြုသွားပါဦးမယ်။ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့ လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။